Bogga ugu weyn > Markhaatiyadayada
Keen markhaatigaaga halkan
Marwo Mascha Fujimoto Waa howlgab noqotay
Arizona, USA Maarso 16, 2021
Seattle, USA Maarso 12, 2021
David Roper Isbitaalka Hawlgab ee IT
Blythewood SC, USA Maarso 3, 2021
Antonis N. Injineer howlgab ah
Patras, Griiga Feb 27th, 2021
e-automatyk ul. Leśna 17C, 62-006 Gruszczyn Diseembar 23th, 2020
Craig Iskii u shaqeysta
Víctor Ramón RG Shaqada Guriga
Leioa, Bizkaia, Spain Sebtember 30, 2020
Lucy Gold Saynisyahanno Hawlgab ah
Paris, France Sebtember 21, 2020
Texas, USA Sebtember 1, 2020
Borsbeek, Belgium Ogosto 30, 2020
Waxay ahayd inaan diro fariin si aan ugu mahadceliyo shirkaddaada weyn Datanumen Outlook repair sheyga!
Waxaan u isticmaali jiray barnaamij kale oo aan ku waafajinayo aragtidayda (Companion Link) iyo taleefankayga oo barnaamijku cilladoobay oo aan ku tirtiray xogtaydii cusbayd ee kombiyuutarkayga iyadoo la adeegsanayo xogta duugga ah ee taleefankayga. Ma aanan haynin kaydinta feylka aragtida waana aad u jahwareersanaa inaan lumiyo cusbooneysiinta muhiimka u ah qoraalada. Waxaan ku qaatay wakhti aad u badan maalmo dhan fekerka iyo ogaanshaha hab lagu xaliyo tan iyada oo loo marayo qaab kasta oo suurtagal ah (noocyadii hore, barnaamijyada kale ee soo kabashada, talooyinka kale ee khadka tooska ah) waxayna umuuqatay wax aan macquul aheyn, laakiin nasiib wanaag ayaa helay Datanumen wax soo saarka oo wuxuu awood u lahaa inuu dayactiro / soo celiyo lost qoraalada! Aniga oo ah ganacsi yar oo aan soo maray qaar ka mid ah waqtiyadii adkaa ee nolosha aad ayaan hoos ugu dhacay, murugay, xanaaqay markii aan u maleeyay in xogtayda xogteyda ay dib u qortay qaladkaas oo aan ku jahwareersaday si aan dib ugu soo ceshano aadna ugu faraxsanahay inaan helo tan Datanumen barnaamijka oo ha ka shaqeeyaan inay soo celiyaan xogtayda, waa wax la yaab leh oo barnaamijku wuxuu ahaa mid dareen leh oo si fudud loo isticmaali karo. Tani waa shirkad aad u weyn oo kaliya waxay rabtay inay ogeysiiso qof walba inuu isbeddel ku sameynayo dadyowga noloshooda si ka wanaagsan !!!
Aad baad u mahadsantahay markale.
Los Angeles, CA, USA Luulyo 17th, 2020
Waxaan qaatay 5 saacadood maanta anigoo raadinaya degel soo bandhigta Soo-kabashada Muuqaalka Muuqaalka Bilaashka ah ama qaaliga ah. Ugu dambeyntii waan helay DataNumen Taasi waxay si fiican ugu habboon tahay biilka hal mar oo aan u baahan yahay! Si fudud loo isticmaalo loona shaqeeyey sidii soojiidasho. Waad ku mahadsan tahay yareynta saacadaha aan jahwareersanaa!
Houston, Texas, US Luulyo 15, 2020
Waxaa la hagaajiyay fayl kale oo aniga ah oo Microsoft leedahay oo loo yaqaan "musuqmaasuq". Milyan mahadsanid
Cavan McDonald Hawlgab
St. Albans. UK July 9th, 2020
Sheer magic - fayl hagaajiyey scanpst.exe xitaa looma aqoonsan karo inuu yahay sanduuqa Muuqaalka Muuqaalka. Mahadsanid mahadsanid shey cabsi badan.
Boqortooyada Ingiriiska Juun 2, 2020
Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo DataNumen inc. caawimaaddaada iyo barnaamijkaaga software oo runtii shaqadeeda qabtay una oggolaaday qof aan khibrad badan u lahayn inuu ka soo kabto faylashiisii ​​Muuqaalka 2007 PST.
Pete M. Hawlgab
Calgary, AB, Kanada Meey 8th, 2020
Waxaan iskudayey inaan furo arkto ay kujiraan sawiro duug ah, laakiin waan kari waayey, qalad awgiis. Markaas ayaan isticmaalay DataNumen Zip Repair wuuna sameeyay sixirkii. Waan ku faraxsanahay inaan dib u helay sawiradayda. Waad ku mahadsan tahay badeecadaada!
Romania Abriil 22nd, 2020
Qalabkaagu wuxuu ahaa mid gacan ka geystay soo kabashada dhammaan emaylkii xaaskeyga. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin adiga iyo kooxdaada oo dhan sida aad u siisay qalabkan badbaadinta iyo fududahay in la isticmaalo !!
Ken Mantey Hawlgab GE Lighting
Chesterland, OH, USA Ogosto 8th, 2019
Just isku day aad kabashada password .pst.
Si aad u wanaagsan ayuu u shaqeeyay.
Waad ku mahadsan tahay wax badan.
Waxaan calaamadeyn doonnaa boggaaga haddii aan u baahanahay inaan soo iibsanno wixii xal ah ee aad bixiso.
Mar labaad waad mahadsan tihiin
Si fudud wax ku ool ah, oo macnaheedu yahay cajiib. Waad ku mahadsan tahay wax badan, gaar ahaan maxaa yeelay haddii kale waxaan awoodi kari waayey inaan jidh ahaan u helo feylasha ay ahayd inaan ka soo kabto, sababtoo ah qufulka hadda jira ee ku jira covid-19. Waxaan kugu faafin doonaa eray aad u wanaagsan oo afka ah oo adiga kugu saabsan.
Milan, Talyaaniga Maarso 16th, 2020
Subax wanaagsan. Waxaan tijaabinayaa softiweerkaaga si aan u dayactiro macluumaadka sql. Kadib markaan qalabkiina wado waxaan hada awoodaa inaan arko dhamaan xogteyda markale again
Texas, US Noofambar 8th, 2019
BAYAAN WEYN! SIDAAS NACAY! WAAD MAHADSAN TAHAY.
Sebtember 2nd, 2019
Aad baad ugu mahadsan tihiin caawimaadda deeqsinimada leh waana ku qanacsanahay jawaabihiina degdegga ah. Xaqiiqdii waxaan kugula talin lahaa badeecadaada.
Waxaa laga yaabaa 31, 2019
Aad baad u mahadsantahay. Xaqiiqdii, xalkaaga soo kabashada feylka faylkaaga 'MS Office' ayaa ah kan ugu fiican ee aan tijaabiyay illaa iyo hadda.
Tomasz Warmuz Agaasimaha Farsamada Landis + Gyr Poland Sp. z oo
Poznań, Poland Meey 20, 2019
Waad ku mahadsantahay zipdayactir. Waxay ahayd softiweer aad u wanaagsan in la dayactiro my zip gudbiso.
Rome, Talyaaniga Abriil 10, 2020
Asheville, NC Waxaa laga yaabaa 10, 2019
Waxaan kuugu hambalyeynayaa FALALKAAGA oo ah midka kaliya ee softiweer ee aan isku dayey ee soo celin kara wax kastoo dbx dhunkaday ah
Faransiiska Abriil 23, 2019
Farriintani waxay u adeegtaa sidii AAD UGU MAHADSAN tahay qalabkaaga dayactirka Muuqaalka qurxoon. Macaamilkeyga waxaa la soo dersay koronto fara badan taasoo sababtay in barnaamijka 'Outlook pst' uu noqdo mid musuqmaasuq ah. Scanpst waxay la timid qalad iyadoo loola jeedo dhibaatooyinka diskiga. Waan khalday khaladkan nasiib wanaagse waan ku tuntay alaabtaada. Waxaan rakibay oo aan socodsiiyay aaladdii qaadatay in ka badan 2 saacadood in la dhammaystiro. Natiijadii ugu dambaysay waxay ahayd Muuqaal si dhammaystiran u shaqeeya oo aad uga dhakhso badnaa sidii hore! Macaamilkeygu waa ka weyn yahay dayaxa maadaama ay tahay xisaab ganacsi oo si weyn ugu tiirsan emaylka.
Waad ku mahadsan tahay wax soo saar aad u fiican, hubaal waan kula talin doonaa dhammaan asxaabteyda IT-ga. Macluumaadkaaga, deegaanka waa sida soo socota:
Desktop pc (qaabkii hore ee IBM) oo leh laba-geesoodka cpu, 4Gb wan, Windows 7 xirfadle ah iyo Muuqaalka 2007. PST waa qiyaastii. 4.5Gb.
Fadlan sii wad shaqada weyn.
Steve IT Xirfadle
Durban, Koonfur Afrika Febraayo 18, 2019
Soo kabasho aan xuduud lahayn. Aad U Fiican
Ambernath, India Janaayo 15, 2020
Moosko, Russia Abriil 29, 2019
Gabal weyn oo software ah. Xaqiiqdii waxay sheegaysaa, iyo qaab aad ufiican oo saaxiibtinimo leh ...
Ricardo Freitas Dowlad-dhismeedka Dhismaha
Funchal, Portugal Luulyo 27, 2019
Peter Keating ex CIO, hadda waa hawlgab
Melbourne, Australia Luulyo 15, 2019
Barnaamij weyn oo lagu soo celinayo ZIP kaydka Waxaan kugula talinayaa ... oo fudud sida albaab.
Bohdan Sheretiuk oo Hawlgab ka noqday Suuqa Mark-SS-service
Lutsk, Ukraine Oktoobar 27, 2019
Fudud et Efficace
Abdellatif FAJR Codsiyada Guud ee Maareeyaha Guud
Casablanca Morocco Diisambar 10, 2019
Super qalab oo si aad u wanaagsan u shaqeeya. Qalabka soo kabashada xogta
Mandip Kanjiya Maamulaha & Aasaasaha Hey Flyer http://www.heyflyer.com/
Cusboonaysiinta MS Office ayaa burburay kombuyuutarkaygii waana inaan tirtiraa oo aan dib u dhigaa. Intii lagu gudajiray Muuqaalka ma aqbalin kii hore.ost faylka iyo aniga lost dhammaan e-maylkeyga oo ku kaydsan fayl-hoosaadyada (kombuyuutarka maxaliga ah oo keliya). Tani waa guuldarro ku timid magaca shirkadda 'Outlook', ma ahan in dib loo abuuro fayl-hoosaadyada ku jira serverka. Ka dib 6 saacadood oo argagax ah, waxaan helay boggaaga oo aan soo dejiyey softiweerka, wax ka yar 30 daqiiqo ka dib dhammaantood way fiicnaayeen markale. Dhammaan emayllada oo ammaan ah oo la heli karo.
Auckland, New Zealand Febraayo 18, 2019
Waxaan ka soo degsaday barnaamijka dayactirka aragtidaada sababtoo ah fariimo qalad joogto ah oo ku saabsan feylahayga Outlook.pst oo aanan si fiican u xirmin isticmaalkii ugu dambeeyay. Waxaad software shaqeeyay si fiican. Faylkayga pst wuxuu ka soo kacay 1.9gb ilaa 2.45gm oo leh 'lost Xog 'la soo helay oo si maskax leh loo galiyay laba fayl' la soo helay '(oo aan kaliya lagu ridi doonin sanduuqa) si aan u daalacdo. Waxay ku qaadatay wax kayar 10 daqiiqo soo kabasho dhameystiran iyo iskaan alaabta waraaqaha la soo helay.
Mar labaad waxaan ku idhaahdaa waad ku mahadsan tahay sida aad u siisay softiweer aad u wanaagsan oo sameeya wixii ay sheegto iyada oo aan xadidnayn isticmaalka gaarka ah. Waxaan aad ugu boorinayaa qalabkan dhamaan sanduuqa aaladda isticmaaleyaasha kombiyuutarka.
Peter Jones isticmaalaha kombuyuutarka guriga
Adelaide, Australia Juun 27, 2019
Qayb aad u fiican oo software ah oo sifiican u socota oo qoto dheer oo qoto dheer si loo helo tirtiray iyo lost emayllada. Waxaan ku guuleystey inaan soo ceshado qaddar macluumaad ah oo aan software kale oo aan isticmaali kari waayey. Runtii waan ku qanacsanahay inaan adeegsan karo codsigan si gaar ah cost.
Auckland, New Zealand Ogosto 23, 2019
Waxaan haystay feyl fayl fayl ah oo khaladaad ku jiray dayactirkiisa, boggaaga internetka wuxuu ku hagaajiyay faylka ereyga 6 daqiiqo.
Tani waa mid gaar ah oo aad u wanaagsan.
Valentin Bogatu injineer Physicist https://helpwithphysics.com
Romania Sebtember 4, 2019
Loo baahan yahay in la soo celiyo faylka keydka ee Windows XP. Barnaamijkaaga ayaa ka shaqeeyey waxyaabo yaab leh ...
Waxaan si rasmi ah ugu talin doonaa!
Eric Seeds Maamulaha IT Cable Shaybaarada Teknolojiyada www.cabal.com
New Brunswick, NJ, USA Janaayo 8, 2020
Talyaaniga Maarso 7, 2020
Mahadsanid! Way shaqaysay.
Waxaan kugula talin doonaa qof kasta oo ay tahay inuu ka soo kabto a Tar gudbiso.
Eugenio G. Bahamondes M.Ss. Injineer sare oo koronto
Injineerada NorTecnica Ltd. Iquique, Chile
Aad baad ugu mahadsantahay sameynta noocaaga demo ee ay heli karaan dadka noocaas ah
hawlgab ahaan (kuwaas oo aan ka mid ahay).
Tarjumaadda Brian Willis Freelance iyo horumarinta bogga
Carletonville, Koonfur Afrika
Software-kani waa mid aad u wanaagsan. Runtii aad baan kuugu mahad naqayaa inaad soo bandhigto qalab muhiim ah (DataNumen Outlook Repair v 1.2 nooc buuxa) oo loogu talagalay isticmaalka dadweynaha. La socodsii haddii aad qalab siin karto wax intaas ka baxsan.
Waxay ku dhammaatay si qurux badan.
Ryan Foote Nexus La taliyayaasha IT
Ugu dambeyntii - badeecad sameeya waxa ay ku tiraahdo iyada oo aan toos loo wajihin qaab aan micno lahayn iyo natiijo heer sare ah. Wanaagsan! Waxaan jeclaan lahaa inaan helo badeecadaada kahor intaan lacagteyda ku lumin kuwa iska yeelyeela badan oo banaanka ka jooga.
Macaamiil aan la aqoon
DZIPR wax yaab leh ayuu qabtay oo wuxuu kabsaday boqolaal MB oo sawiro dhijitaal ah oo aan moodeeyay inaan lost weligiis.
All ugu fiican
Go'an Luudh - Badbaadiyaha Nolosha!
Hadda waxaa laga soo ceshaday qiyaastii 1GB sawir Zip faylasha Waxaan u maleynayay in runti la ii buuxiyay laakiin DZIPR kaliya ayaa la faqay iyada oo loo marayo habka ugu badan ee dufcadda. Hal sawir igama lumin. Aad u fudud oo dhakhso leh in la isticmaalo, sidoo kale. Laguma talin karo si heer sare ah.
Dadaalkeyga soo kabashada ee aan la leeyahay 'DOER' hadda waa 100%.
Waxaan u taageeray faylasha qaar a Zip faylka ka soo baxa buuggeyga 'Mac G4'. Ma lihin wax aan ka doorto marka laga reebo inaan iyaga ku taageero PC-ga, iyo markaan isku dayo inaan unzip, Waxaan ogaaday inaanay waxba furi karin 10.2 GB kaydad musuqmaasuq ah. Aniga oo ka shakisan, waxaan soo dejiyey DZIPR, oo waxaan ogaaday inay hagaajin karto faylkayga, sidaa darteed waan sii waday oo waxaan amar ku bixiyay in laga saaro xaddidaadda nooca tijaabada ah. Mar labaad ayaan orday, oo intii ay dayactireysay, kaliya maahan inay soo ceshato xogta qaar, way soo ceshatay DHAMMAAN! Aad ayaan ugu faraxsanahay in Taageerada Tech ay si deg deg ah uga jawaab celisay e-maylkeyga, waxayna ahaayeen kuwa aad waxtar u leh (badalida ra'yigayga guud ee taageerada tiknoolajiyadda software) Waad ku mahadsantahay sameynta noocaan waxtar leh. Ma jiraan qorshayaal nooca OS X ah waqti kasta?
Dayactirka Dufcadda ka dib, dhammaan faylasha si guul leh ayaa loo dayactiray waxayna u soo saarayaan mac-keyga dariishadaha PKZip iyo Khariidad Shabakadeed oo SaMBa ah. Waa inaan ku nuuxnuuxsadaa inaan si aad ah ugu faraxsanahay in badeecadaadu si fiican u shaqeyso, iyo in kaalmadu ay fiicneyd
Salaan, markalena waad mahadsantahay
Mahadsanid! Dayactiray oo lagu keydiyey flash drive ka hor intaanan qashin IE iyo OE !!!
Alaab aad ufiican !! Waan shaki qabay laakiin hadda dib ayey u soo ceshatay keydkii zip keydkeyga e-maylkeyga waana la badalay 🙂
Mahadsanid badan iyo salaan diiran
fiican waan ka helay waana u maleynayaa inaan iibsan doono
Shaqeeyaa weyn. Waqti badan baa i keydiyey halkii aan ka soo dejin lahaa feyl ka yimid ilo kale maxaa yeelay feylku wuu musuqmaasuqay, barnaamijkan ayaa hagaajinaya. Barnaamij aad u Caan ah !!!!!!!! *****
Waxaan raadiyay meel aan post ammaano laakiin waxba ma helin. Waxaan jeclahay inaan ka caawiyo dadka kale ee dhibaatada la gala musuqmaasuqa zip faylka. Waxaan ka shaqeynayey PC-ga tan iyo 1982, kahor IBM ama Microsoft waana barnaamijkii ugu horeeyey ee si dhakhso leh, fudud oo wax ku ool ah u shaqeeyey.
Waxay shaqeysay GREAT.
Si fudud sidoo kale.
Xaaskeygii wax walba wey sameysay.
Nasiib wanaag waxaan haystay dhamaan feylasha dbx-dii oo aan dib uhelay Nofeembar 19-keedii inta hartay oo dhanna wali waxay kujireen server-ka emaylka, marka marki aan dayactiray, waxaan soo jiiday 95 emayl, laakiin waxay ahayd DHAMMAAN halkaa.
Si fudud ugu qalanta 50ka doollar.
Weligay ma helin zip barnaamijka dayactirka ee shaqeeyay.
Midkani wuu sameeyay!
Waxaan soo ciyaaray ciyaaro badan, iyo noocyo kale oo feylal ah oo la musuqmaasuqay, ka hor intaanan helin barnaamijkan, ayaa khalkhal galiyay kombuyuutarkayga, kani waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aan isticmaalay, anigoo ku celinaya saaxiibaday
Tani si fiican ayey u shaqeysay! Aad baad u mahadsan tahay! Waxaad ka badbaadisay kooxdeyda
dib ugu noqoshada 16 bilood oo shaqo ah markale. DZIPR sifiican ayuu uqalmay
$ 30 ayaan ku qaatay!
Waxaan isku dayay dhowr shey markaan raadinayo si aan u soo ceshado a Zip feyl ka koobnaa sannad dhan dukumiintiyada e-maylka laakiin kuwa aan guuleysan, illaa iyo hadda. Waxaan soo dejiyey nooca demo ee DZIPR waxaana igu dhiirigaliyay warbixinta soo kabashada sidaa darteed waxaan maalgaliyay lacagta yar oo waxaan soo dejiyay nooca buuxa.
Waxaan aad uga naxay, badeecada oo buuxda waxay ku guuldareysatay inay soo ceshato feylkeyga sidaa darteed waxaan la xiriiray taageerada @ dayactirka-zip-files.com. Wakiilada Taageerada Tech waxay ka codsadeen diiwaanka qaladka DZIPR iyo dib u eegis taxaddar leh ka dib, waxaan soo jeediyay hanaan aan isku dayo. Way shaqaysay!
Badeecadan iyo shirkadda taageerada farsamo ee fiican waxay keydisay diiwaanno muhiim ah oo aan moodayay inay ahaayeen lost wanaag. Mahadsanid!
3GB sawiro ah ayaa hada la keydiyay! Qalinjabinta kuliyada iyo sawirada saaxiibada ayaa la keydiyay! Mahadsanid.
Soojeedinta muuqaalka: karti u liistada faylasha aan keydsan?
Dokumentiga OpenOffice ee la hagaajiyay wuxuu u shaqeeyaa sidii soojiidasho! Suul-weyn-weyn DZIPR!
Badeecadani waa fiican tahay! Waqti badan ayaad naga badbaadisay. Nagala soo xiriir barnaamijyada kale ee aad yeelan karto.
Go'an xumaantayda Zip faylka, sidii loo ballanqaaday
Ma rumaysnayn inay shaqeyn doonto, laakiin way shaqaysaa. Way xun tahay inay hagaajin kari weydo ACE iyo RAR sidoo kale faylasha
"Way ii shaqeysay!"
Waxaan isku dayay hal feyl oo waxyeello ka soo gaadhay floppy waana ii shaqaysay. Kaliya 5 fayl oo ka mid ah 40 ayaa waxyeello gaadhay illaa xad.
Waan soo ceshay dhammaan dhaawacyadayda *.zip faylasha Dhibaatada kaliya waxay ahayd inay dhib kala kulantay *.zip faylasha oo iyaga laftoodu ay ahaayeen zipwaddo Haddii kale 10 10kiiba XNUMX!
mahadsanid. Shayga si fiican ayuu u shaqeeyay.
Aad baad ugu mahadsantahay emailkaaga degdega ah.
Waxaan isku dayay tan wax walbana waxay u shaqeynayeen sidii riyo!
Mahad badan, waxaan awooday inaan kabsado 900 MB!
Waxaan hadda iibsaday oo aan adeegsaday DOER si aan uga soo ceshado mid ka mid ah faylalka isticmaalaha .dbx ee ka badnaa 2GB. Si fiican ayey u shaqeysay - waad ku mahadsan tahay wax soo saar aad u faa'iido badan.
Steve Forrette MarkeTouch Warbaahinta
"Runtii waa la shaqeeyay"
Waxaan haystaa badeecad buuxda, waxay iga caawisaa inaan dayactiro faylka 300MB
CAJIIB! Waxaad keydisay 2 saacadood oo u qalma waqti iyo safar horey iyo dib magaalada oo dhan. Mahadsanid!
Waa wax lagu farxo in lagu arko barnaamij waxtar leh oo fudud oo halkaa ka socda oo runtii shaqeynaya! Waxaan isku dayay si khiyaano leh runti runti uma maleynin inay shaqeyn doonto. DZIPR wuu i qarxiyay!
Waxaan halgan ugu jiray sidii aan uga soo kaban lahaa 4 sano oo e-mayl ah dirawalkeyga adag ee burburay usbuucii la soo dhaafay ama sidaas.
Waxaa loo adeegsaday nooca demo ee DOER - ma sameynayo nooca buuxa ee cadaaladda !! Nooca buuxa ayaa soo kabsaday 100% ee waraaqahayga - waa maxay qayb qurux badan oo software ah - sidoo kale qiimo aad u fiican.
Mar labaad mahadsanid,
"YAY AYAA QAADAYA QALADKA CRC: D"
Most waqtiga waqtigaadii caadiga ahayd ee aad furtay haddii aad soo dejiso a zip faylka waxayna leedahay qalad crc, gaar ahaan haddii zip faylka kaliya waxaa kujira faylka ISO. Badeecadani waxay hagaajisay qaladkii CRC-da zip faylka oo ii oggolaaday inaan soo saaro feylka ISO oo aan cillad lahayn!
Runtii waa barnaamij aad ufiican, oo loogu talagalay dadka soo dejista faylasha waaweyn ee sfx ee internetka ee waxyeelada leh waxaan kugula talinayaa barnaamijkan! wuu hagaajiyaa zip faylasha iyo faylasha sfx waa wax weyn! laakiin waxaan u maleynayaa in barnaamijkan softiweerku u baahan yahay awood uu ku dayactiro rar sidoo kale faylasha 🙁
Mahadsanid, way shaqeysay Wax soo saar aad u fiican - run ahaantii badbaadiye nololeed!
Xaqiiqdii! Waxaad isticmaali kartaa qaybta ku qeexan websaydhkaaga ama suugaan kasta oo xayeysiis ah. Ii naxariis samee oo tifaftiro tixraaca CRC, maaddaama CRC iyo Dib-u-soo-celinta 'Cyclic Redundancy' ay runti yihiin qalad isku mid ah. Haddii aad rabto xitaa amaan intaa ka sii badan, maanta, waxaan ku helay cusbooneysiin emayl ah oo loogu talagalay shey-wadaag wadaag ah oo ka kooban a CAB faylka ku jira a Zipfaylka. Hagaag, Guulzip, PKZip & WinAce dhammaantood waxay soo sheegeen in feylku musuqmaasuqay oo aan la furi karin. Waxaan ku dhex maray DZIPR oo kaliya ma aysan sameynin zipfaylka la hagaajiyo, laakiin ku lifaaqan CAB feylku wuxuu ahaa baay sax ah oo loogu talagalay baay ciyaarta cabfaylka aan u baahnaa ee cusbooneysiinta. Waxay u muuqataa in tan yar DZIPR Gem waa wax Microsoft ay tahay inay rukhsad siiso. Markale mahadsanid,
Waqooyiga Carolina, USA
Waxaad ku heli doontaa codkeyga adeegga PC-ga ugu fiican. Tan iyo markii aan iibsaday DZIPR, waxaan u isticmaalay dhowr jeer feylasha muujinaya CRC-da xun ama lahaa dhibaatooyin kale oo sababay Winzip ama WinAce si loo xidho loona joojiyo hawsha. DZIPR ayaa hagaajiyay wax walba oo aan ku tuuray. Muxuu yahay qayb qurux badan oo qurux badan oo injineernimada software-ka ah.
La-Taliyaha Database Rick Fayter
Kaliya waxaan jeclaan lahaa inaan kuugu mahadnaqo. Waan iibsaday DataNumen Zip Repair Ka yar
laba saac ka hor oo si fiican ayey u shaqeysay !!! Khibradeyda waxaa lagu soo koobi karaa
WAAD BADBAADISAY SHAQADAYGII!
Adeegga Kombuyuutarka Ardor
Xaqiiqdii waxaan xalkaaga ka helay 10-kii daqiiqo ee ugu horreeyay!
Sikastaba in kastoo markii hore aan moodayay inay tani tahay lacag aad u fara badan oo lagu bixiyo barnaamij yar, DataNumen Access Repair dib ayaan u soo ceshanay keydkeena sidaa darteed aad ayaan u faraxsanahay 😉
Wax kasta oo khadka tooska ah ah
Wow barnaamijyadiinna ragga ahi waa wax laga cabsado waxaan soo degsaday softiweerkii tijaabada ahaa waxayna awoodday inay i tusto dhammaan miisaskii aan ku lahaa si sax ah. Sofware-kani wuu ruxmay oo aad buu ii caawiyey.
uu leeyahay dayactir wanaagsan oo horay loo sii wado
Mar labaad ayaan barnaamijka kala soo baxaa & dhammaan xogta dayactirka waxaan ugu dirayaa comp. Qaabkaas barnaamijku wuu shaqeeyaa si aad u wanaagsan oo uu hagaajiyaa 91% diskkeyga !!!
Waxaan badbaadiyey almost, dhammaan xogtayda muhiimka ah !!!
Waad ku mahadsantahay barnaamijka DZIPR! Si aad u wanaagsan ayuu u shaqeeyaa!
Waan iibsaday DataNumen Outlook Express Repair oo aan si guul leh u soo ceshay faylalka galka ku jiray oo si uun uga madhnaa liiska OE. Alaabtaadu si fiican ayey u shaqeysay; mahadsanid.
Software-kaaga ayaa wax badan iga caawiyay, mahadsanid mahadsanid mahadsanid aad iyo aad !!!!!!!!!!
Kaliya waxaan rabay inaan kuusiiyo taas DataNumen DBF Repair awooday inuu ka soo cesho dhammaan xogta laga helo ACT-keena! Kaydka xogta 2000.
Stephen Production Bariiska Agaasimaha
Bill Timaha My Guy Computer
Rockwall, TX, Mareykanka
Taasi way shaqeysay. Waad ku mahadsantahay kaalmadaada.
John iyo Connie
Salaan Kaliya waxaan iibsaday barnaamijkaaga, waxayna hagaajisay muhiim ZIP faylka Mahadsanid.
Waxaan iibsaday software-kaaga shalay si aan uga soo ceshto 7GB tar Faylka oo ahaa gabi ahaanba galka "Dukumintiyada iyo Dejimaha" ee ka yimid laptop-kayga kaas oo u socda adeegga. Dukumintiyada qaarkood waxay ahaayeen * kuwo aad muhiim u ah * sida xogtayda Quicken, qaansheegta meheraddayda, iyo soo koobitaanka diyaarinta canshuuraha ee xisaabiyaha.
Nooca bilaashka ah wuxuu muujiyay inuu si muuqata u dayactiri karo wax kasta oo aan lost, sidaa darteed waxaan iibsaday oo aan diiwaangaliyay barnaamijka. Markii aan waday, waxay kaydisay Docs_fixed.tar, oo waxaan orday a *tar xvf * dushiisa Waxay ku dhimatay qaladaad oo waxay martay most waxyaabaha ku jira.
Si kastaba ha noqotee, dib ayaan u orday tar amar ku bixi doodaha magaca faylka si aad un u soo saarto kuwa aan xiiseynayay (dhammaan "Dhaqaalahayga"
galka), iyo Ilaah baan ku dhaartaye, dhammaantood waxay ku heleen xaalad qumman.
Kaliya waxaan rabaa inaan idhaahdo waad mahadsantahay. Mahadsanid. Mahadsanid. Mahadsanid. Mahadsanid. Mahadsanid. Haddii ay jiraan wax aan kuu qaban karo mustaqbalka (dambiisha miraha ee Kirismaska, baabuurkaaga dhaq, qaad dharkaaga, ixtiraamka galmada) Waxaan kugu leeyahay deynta adiga, shirkaddaada, iyo barnaamijyadaada.
Niman yahow dhagaxa.
Kevin Smith Electronics Designer, Beeraley, Koronto, Muusikiiste
Waad ku mahadsantahay kaalmadaada. Aad baan ugu qancay DZIPR.
Wajiyada Sawirada Sawirada
Waxaan haystay 800 MB zipfaylka leh 97,00 oo lagu abuuray Solaris oo khalad ku helay "dirkiisa dhexe". Markii tani dhacday, ma awoodin inaan helo wax ka badan kii ugu horreeyay ~ 30,000, iyo heerka ziphagaaji yutiilitiyada yimaadda qayb ahaan pkzipc iyo GuulZip Waxba kama qabanin caawinta.
Tani waxay ahayd mid si gaar ah wax looga xumaado maxaa yeelay waxaan ogaa most ama faylasha oo dhami wali halkaa ayey kujireen - si fudud ayey qalad ugu ahayd "miiska waxyaabaha ku jira".
Waan adeegsaday Datanumen's DZIPR inuu ka soo kabto 98% faylalka ku jira arjiga! Waan ku faraxsanahay inaan helay shirkad sida oo kale ah Datanumen iyadoo la adeegsanayo aqoonta sida looga soo saaro waxyaabaha wanaagsan kaydinta, gaar ahaan marka dir dhexe la musuqmaasuqo.
Waad ku mahadsan tahay inaad igu soo noqotid. Waxaan tan iyo markii aan iibsaday softiweerka oo aan helay cinwaanka si aan toos ugula soo dego barnaamijka. Waan rakibay oo si qurux badan ayey u shaqeysay!
Waan sameeyay sidaad soo jeedisay wayna u hirgashay! Waad ku mahadsantahay inaad iga caawisay inaan dib u helo 10 sano oo shaqo ah !!
Nevernind - hadda way heshay, xiriirku wuxuu ku yimid email sidoo kale, kanna wuu shaqeeyay.
Tani si fiican ayey u shaqeysay. Mahadsanid!
Waad ku mahadsantahay soo galinta. Waxaan gartay waxa la samaynayo inta ka horaysa. La soo helay almost dhammaantoodost iimayl Waad ku mahadsan tahay badeecad wanaagsan ...
Justin Moss Engineer Codsiyada
Waxaan helay aaladdaada anigoo isticmaalaya websaydhka http://rmse.awardspace.com waxaanan jecelahay inaan iraahdo aaladdaadu waa mid laga cabsado waxyaabo badan. Shaqo Wanaagsan Haddii aad hayso liis soo diris ama joornaal fadlan isoo qor. Salaan, JA
Badbaadiyay Baconkeyga! Mahadsanid!
Waxaan ku helay DVDRom ah zippst-faylka. Waan awooday inaan soo saaro wax walbana sifiican ayey ushaqeynayaan markale.Waxaan jecelahay inaan kaaga mahadceliyo nooca taageerada fiican leh iyo dhammaan caawimaadda aad isiisay. Haddii aysan adiga iyo AOR ahayn adiga waxaan u maleynayaa inaanan soo kaban lahayn xogta ku jirta feylka.
Ha u oggolaan, way shaqaysay! Waxaan ahay SOOO FARXAD! Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada oo dhan! Hadda 100% waan ku qanacsanahay waana kaa joojinayaa inaan ku dhibayo. lol. WAAD MAHADSAN TAHAY
Mar labaad waad ku mahadsan tahay dhammaan caawimaadda aad bixisay, waxaanan kugula talin doonaa badeecadan qof kasta oo dhibaato la mid ah leh!
Waad ku mahadsan tahay fikradaada.
Waxaad haysataa badeecad aad u fiican. Waxay iga soo heshay faylal badan aniga.
Arthur J Wehlow Maareeyaha Muuji Xalka Xisaabaadka
Waxaan si guul leh u soo saaray xog.
Waxaan u maleynayay inaan iska dhiibo dhammaan xogta ...
Runtii waan ku qanacsanahay kaalmadaada, mahadsanid markale.
Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada - runtii waan ku qanacsanahay.
Shaqaale ka tirsan Procter & Gamble
Waa salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Waxaan ku guuleystey inaan xalliyo naftayda tan iyo e-maylkii ugu horreeyay, marka waan ka xumahay inaan ku dhibay. BTW, jecel sheyga.
Suurtagal ma tahay in la caddeeyo goobta iyo magaca fayl kasta oo ku yaal tabta Dayactirka Dufcadda? Tani mar horeba waa suurtogal in tabta Dayactirka, marka kaliya la shaqeynayo hal feyl, laakiin runtii way fiicnaan laheyd haddii ay suurtagal tahay in wax laga beddelo faahfaahinta faylka wax soo saarka ee hagaajinta dufcadda.
Wax soo saar fiican! AOR ayaa soo kabsatay most waxyaabaha ka yimid feyl aad u muhiim ah oo ah 6GB PST. Iskudayadaydii hore ee SCANPST waxay kaliya kabteen 500mb!
Mark Humphrey Maareeyaha Shabakadda
Gacaliyeyaal sharafta leh,
Waxaan maanta iibsaday adiga Advanced Outlook Express Repair - Hambalyo, si la yaab leh ayey u shaqeysay!
Waxyaabaha kale ee yar yar, sida qorqorka shimerring inta lagu gudajiro hawsha soo kabashada, ama, sameynta waxyaabaha kujira faylka Inbox dbx oo loo dhigo 2 faylal isla waqtigaasna e-mayl. Haa, waxaan weydiiyay softiweerka inuu abuuro fayl kale oo emayl la soo helay ka dib markii aan ka soo ceshtay 2000 e-mayl, laakiin, waxaan filayay inaan helo 2 faylal oo guuleysta oo ku saabsan taariikhaha e-maylka, mana ahan dhacdooyinka foosha xun ee 2 fayl isla muddadaas waqtiga e-maylka!
Laakiin, sidaan hore u soo sheegay, kuwanu waa waxyaabo yaryar, oo wixii ka sarreeya, waan ku faraxsanahay hawsha barnaamijkaaga uu qabtay, waana hubaal, waxaan kula talin doonaa saaxiibbadaa.
Waxaan kuu rajaynayaa guul badan inaad ka gaarto horumarinta & abuurista barnaamijyada noocaas ah!
Aad baad u mahadsantahay, Mahadsanidin,
Tilmaamaha Ruuxda ee Yigal
Waad ku mahadsantahay jawaabta degdega ah ee dhameystiran. Xalkaagu wuu shaqeeyay! Softiweerka weyn ee Faylka Faylku wuu shaqeeyey, ka dibna Advanced Zip Repair soo kabsaday file kasta!
Hadda waxaan ahay macmiil aad u qancay, waana ku faraxsanahay inaan sii wado isticmaalka sheyga. Mar labaad waad mahadsantahay, oo waxaad leedahay maalin kufiican.
Qiyaasta Jiddah Saudi Arabia
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada - ku qanac caawintaada.
Dhab ahaantii, waxaan iibsaday AOER shalay, iyo dhammaan lost emayllada ayaa la helay !!
AOER wuxuu umuuqdaa mid sifiican ushaqeynaya, waana inuu hagaajiyaa dhamaan dhibaatooyinka OE!
Waxaan lahaa lost emayllada muhiimka ah inta lagu gudajiray hawsha wadajirka mana uusan aqoon sida loo helo ama dib loogu furo. Badeecadaada ayaa xalisay arinta (ugu dambeyntii).
Si kastaba ha noqotee, waa inaad u sharaxdaa kuwa ludites aniga oo kale ah in wixii duulimaad ah ee 'BAK' ah loo beddeli karo DBX. Most feyl aan habooneyn oo aan doonayay waxaa loogu magac daray BAK (taas oo aan fahamsanahay inay ku dhacday howsha wadajirka) waxayna igu qaadatay maalin cilmi baaris ah inaan ka shaqeeyo in aan badali karo magaca feylka ka dibna aan ku dabaqo badeecadaada si aan u sameeyo inta hartay. Mar alla markaan ka shaqeyn lahaa waxay u shaqeysay sidii daaweyn!
michael mitchener milicsiga ganacsiga
Waxaan haysanay 60 Gigabyte zip feyl aan furi doonin Advanced Zip Repair dayactiri kari waayey maadaama uu aad u weynaa. Si kastaba ha noqotee, DataNumen waxay i siisay gabal kale oo weyn oo software ah oo u kala qaybiyey feylka faylal badan oo la maamuli karo 1 Gigabyte, ka dibna Advanced Zip Repair si guul leh u dayactiray mid kasta. Waxaan isku daynay alaabooyin kale oo dayactir ah oo aan ku guuleysan, sidaa darteed hubaal waan ku soo laaban doonaa DataNumen haddaan dhibaatooyin kale oo xog ah qabno mustaqbalka. Alaabooyin qiimo badan iyo taageero weyn!
DataNumen Access Repair ka soo kabanayo xog ka badan wax soo saar kasta oo kale oo aan isticmaalay. Waxay iga caawisay inaan keydiyo keydad badan oo macluumaad la kharribay. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helay sheygan.
Margaret Messick Costume Kheyraadka Waxsoosaarka
Davis, CA, USA Juun 16, 2015
San Diego, CA, USA May 15th, 2015
Wax dhibaato ah kuma qabin barnaamijkan wanaagsan. Eray ku socota dadkaas laga yaabo inay dhibaatooyin soo mareen. Haddii 'DataNemen' Rar Barnaamijka Dayactirka 'ayaa ku guuldareystay inuu dib u habeeyo feyl mararka qaarkood iskuday inaad ku dayactirto tusaha kale _ buugga ku yaal flash-ka banaanka ama hard-drive-ka ayaa natiijooyinka ugu fiican aniga ii sheegay Kaliya waa caqiido ahaan inaan sidaas sameeyo, most waqtiga si buuxda ayuu u shaqeeyaa.
Waqti kahor ayaan iibsanayaa Datanumen Outlook Repair waanan ku faraxsanahay, anigoo u isticmaalaya qaab marba mar. Hadda waxaan u baahanahay inaan ka soo ceshto emaylka la tirtiray ee farabadan NSF Lotus Notes faylka. Waxaan u maleynayay inaad haysato badeecad wanaagsan laakiin alas waxba kama lihid Lotus Notes. Hagaag, maadaama aad wax saxdo, maxaa diidaya a Datanumen Dayactirka NSF? Salaan wanaagsan, Roberto
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka tago quudinta-dib-u-celinta ku saabsan ka-qayb-qaadashadayda wanaagsan ee alaabtaada _ talo qaarna sidoo kale sida ugu weyn ee cillad-darrada 'DataNewmen Rar Dayactirka 'barnaamijka dayactirka a rar faylka. Waxaan ogaadey in markay taasi dhacdo, guusha hagaajinta feylka su'aal laga qabo marwalba lagu guuleysto iyadoo loo wareejinayo galka kale laguna celcelinayo howsha halkaa ka jirta _ sida caadiga ah flash ama bannaanka-adag.
Haddii aad u baahatid inaad ku taageerto qiimeynteyda sheyga mid ka mid ah faahfaahinteyda shaqsiyadeed miyaad ku koobi kartaa gobolka _ 'Boqortooyada Ingiriiska'. Mahadsanid
Boqortooyada Ingiriiska Sep 6th, 2014
Oh my good, MAHADSANID! Ma rumaysan karo inaad awood u lahayd inaad wax ka beddesho! Waxaan macno ahaan isku dayay wax kasta oo kale- tani waa mid cajiib ah, waana ku faraxsanahay.
Mar labaad waad ku mahadsan tahay kaalmadaada! Waan ku faraxsanahay inaan qoro markhaati haddii aad u baahato qof kale - cid kale ma awoodin inay tan hagaajiso !!
Mareykanka Sebtember 16th, 2015
Mahadsanid Alan, Dayactirka shaqeeyay almost kaamil ... sifiican uma fileynin. Aad baad u mahadsantahay. Helmut
Tübingen, Jarmalka Sep 13th, 2018
Aad baad ugu mahadsantahay inaad taageerto --- waxay ku shaqeysay abuuritaanka muuqaal cusub.
Houston, TX, USA Waxaa laga yaabaa 23rd, 2018
Waxaan kaliya rabay inaan dhaho waad ku mahadsantahay barnaamijka.
Faylka xogta My Outlook wuxuu umuuqdaa mostgo'an
Waxaan u baahanahay inaan baaro oo tirtiro tanno ah wixii la soo galiyay laakiin, waxaan u maleynayaa, inaan soo kabsaday most xogtayda.
Marnaba ma ogaan doono waxa aan haysto lost si joogto ah!
Naperville, IL, USA Diseembar 4, 2018
aaladdaadu waa tan ugu wanaagsan ee aan awoodi karay inaan ku hagaajiyo faylka galaangalka ee jaamacadda si loogu isticmaalo shaqsi ahaaneed waana ku faraxsanahay
Maareeyaha Shabakadda Richard Fixsa
Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada iyo xiisahaaga Weligaa dhib kuma qabin sinnaba.
Aad ayaan ugu qancay. Waxaan kugula talinayaa qof walba. Waxaan kuu rajeynayaa inaad guuleysato.
Ankara, Turkiga Jan 29th, 2019
Brownwood, Texas, USA Ogosto 13th, 2014
Qaali laakiin waxay samaysay wax kasta oo la ballanqaaday oo ay ku jiraan lifaaqyada
Marka waa imisa qiimahaasi? Aad loogu taliyay!
Naqshadeeyaha Brock Croome
Waqooyiga Vancouver, BC, Kanada Nofeembar 1st, 2015
Advanced Outlook Repair wuxuu si buuxda u dayactiray 19GB Muuqaalka 2007 .pst oo leh faylal badan oo ka badan 15 sano. Waxay noqotay mid kharribmay xidhitaan adag kadib, mana furi doono, xitaa qaab aamin ah. Waxaan ka maqlay qalabkaaga "chcw" oo ku yaal ExpertsExchange.com iyo miiska isbarbardhiga boqolleyda miisaska u dhexeeya aaladaha Datanumen.gage. Waxaan sameeyay nuqul ka mid ah .pst, waxaanan isku dayay nasiib la'aan Microsoft scanpst.exe. Qalabka xisbiga 3aad ayaa caawiyay sanado kahor Outlook Express diinta sidaa darteed waxaan eegay internetka. Advanced Outlook Repair wuxuu ahaa kan kaliya ee hela dib-u-eegis wanaagsan oo wanaagsan kiisaska murugsan, waxayna muujiyeen tusaalooyin sidan oo kale ah, sidaas darteed waxaan helay kuubbo waana iibsaday. Baaskii ugu horreeyay wuxuu sheegay in feylkii asalka ahaa lagu furay meel kale (inkasta oo dib loo bilaabay). Markii xigtay ayaan isku dayay ka hor imaadkii nuqulka, daqiiqado gudahood (qiyaastii 20%), ayaa Muuqaalkeygu soo shaacbaxay - oo leh faylalka iyo emaylka oo dhammaystiran oo dhammaystiran. Way iga nixisay maxaa yeelay waxaan moodayay inaan wax taabtay oo waan xidhay. Daqiiqado yar kadib, taasi
Houston, TX, USA Nofeembar 1, 2015
Melbourne, Australia Janaayo 1, 2017
Boston, MA, USA Jan 25, 2017